DaroogadaInc. Booqashada Beerta CBD ee Isbaanishka: "Waxaan Rabnaa Inaan Xirfad u Lehno Warshadaha CBD" • Dawooyinka Inc.eu
Intii lagu guda jiray raadinta shirkadaha xiisaha leh, DrugsInc. midigta CBD Beerta CBD-Isbaanish halkii Qadaadiic. Milkiilaha iyo khabiirka Peter Vermeul ayaa na qaabilay. Si lama filaan ah, waxaan ku dhammaannay kulan aan la yeelannay dhowr dhinac oo waaweyn oo ka socda warshadaha CBD, sida faa'iidooyinka kooxda, Seeds Amsterdam Marijunana en van Goghs. Kulan weyn oo xirfadlayaasha warshadaha ah.
"Waxaan hadda baareynaa koox dad ah oo isku fikrad ah waxaanna fiirineynaa fursadaha lagu ogaan karo xarun soo saarista oo leh dhammaan shahaadooyinka iyo rukhsadaha lagama maarmaanka ah," ayuu yiri Vermeul. Booskaas, waxaan u soo bandhigi karnaa dhinacyada aan xulnay qandaraas, si beeraleydu u kobcaan wax soo saar buuxa oo sharci iyo tayo sare leh laga bilaabo xilligaas. ”
Hubinta tayada alaabada CBD
In qarxin koray CBD qaar badan oo ka mid ah beeraleyda aan xirfadleyda aheyn ayaa firfircoon suuqa kuwaas oo iibiya wax soo saar tayo liidata. Isbaanishka, Talyaaniga iyo qeybaha kale ee Yurub gaar ahaan, waxaa soo ifbaxay walaac ku saabsan badashadaan waxa loogu yeero shirkadaha CBD ee sheeganaya inay soo saaraan ubax gebi ahaanba si sharci ah. Ficil ahaan, waxay umuuqataa in 80% beeraleydan aysan u hogaansamin xaddiga ugu badan ee 0,2% THC waxyaabaha ay soo saaraan oo ay sharciga jebiyaan. Qayb ahaan tan awgeed, waa kiiska Isbaanishka in geed kasta oo xashiishad ah oo la beero waa in horey loogu sii iibiyaa qandaraas. Haddii kale, beerista waa sharci-darro oo lama oggola. ”
CBD Spain Cuntada dawada SL
CBD Spain Cuntada Caafimaadka SL waa mid ka mid ah wax soo saarayaashii ugu horreeyay ee isku mid ah CBD-da ee Yurub. Laga soo bilaabo 2010 waxay si xamaasad leh u soo saaraan wax soo saar tayo sare leh oo Dhireedka CBD-ga ah ee saliidda laga soo saaro / saliida iyo alaabada kale ee warshadaha. Wixii markaa ka bilaabmay ganacsi qoys oo ku yaal koonfurta Spain ayaa si tartiib tartiib ah ugu soo kordhay urur ballaadhan oo leh aqoon ka soo jeeda abuurka illaa dhammaadka wax soo saarka.
Si aad ula socodsiiso? Waxaan isha ku haynaa isbeddelada cusub ee ku hareeraysan Beertan CBD waxaanan si joogto ah ugu soo dhejin doonnaa cusbooneysiinta barnaamijkeena muddada soo socota. Aad ayaan ugu qanacsanahay qaabka iyo aragtida shirkadan, luul warshadaha kaliya ku dadaalaya tayada ugu fiican.
Cilmi-baaris cusub, oo laga sameeyay Jaamacadda Queensland, Australia, ayaa muujisay in isku-darka xashiishadda ...
CBD: xiisaha qadka tooska ah ee loo yaqaan 'cannabidiol' ayaa kor u kacaya aadna u kordhaya
Mareykanka - Sida laga soo xigtay falanqeyn cusub, hadda waxaa jira baaritaanno badan oo internetka ah oo loogu talagalay cannabidiol ...